DCN Yekufambisa Network Solution
Background AFC Sisitimu zvinoreva otomatiki Fare Unganidzo Sisitimu, ndeye otomatiki network sisitimu yekutengesa matikiti, kuchaja, kutarisa uye manhamba echitima chekufambisa. Iyo system yakavakirwa pakombuta, Kutaurirana, network, uye otomatiki kutonga. AFC system inogona kupatsanurwa ...
Nhoroondo Yekutarisa Nhasi shopper irikuda - uye inochinja kuvimbika kwavo kune mamwe mabrand kana zvatariswa zvisati zvaitika. Nzira dzekushandura dziri kumanikidza vatengesi kuti vaongorore zviitiko zvavo zvemuchitoro kuti vasangokwezva vatengi vatsva, asi kuti vawane nzira nyowani dzekuchengetedza vatengi varipo ...
Mamiriro eHotera Network Indasitiri Iwo akangwara zviteshi ari kuve anodikanwa maturu ehupenyu hwedu hwezuva nezuva. Paunenge uri parwendo, ungangoda ivo kuti vaite basa rehofisi vari kure, kutora chikamu mumusangano uri kure, kunyorera chitima kana tikiti yendege, kugamuchira nekutumira e-mail, zvichingodaro. Naizvozvo ...
DCN Hutano Hutano Network Solution
Ruzivo rwekumashure Kune nzvimbo yehutano, chipatara chinogara chichipa akasiyana siyana marapirwo kumurwere, sekuchengetwa kwechimbichimbi, kuvhiyiwa, zvekubereka uye zvekubereka. Kuti uwane hutano hwakanakisa, uchishandisa yekucheka-kumucheto uye yakavimbika chirwere t ...
DCN Inopindirana Campus Network Solution
Ruzivo rweMashure Iko kukurumidza kusimudzira kweInternet, kunyanya iyo yekuona, gore, tekinoroji iyi iri kutyaira shanduko mumaindasitiri edzidzo. Gore ndicho chiratidzo chikuru pane zvese dzidzo yekutanga uye neminda yepamusoro. Kuwana nyore kudzidzo zviwanikwa chikuru ...